Nhau - Lesite zvigadzirwa zvitsva zvave indasitiri zvinoratidzwa ne2020 Waterproof Exhibition yakavhurwa kwazvo!
Lesite zvigadzirwa zvitsva zvave indasitiri zvinoratidzira ne2020 Waterproof Exhibition yakavhurwa kwazvo!
Mwaka wegoridhe mwaka unozorodza uye michero inonhuwirira. Musi waGumiguru 28th, 2020 China International Roofing uye Building Waterproof Technology Exhibition inogarwa neChina Building Waterproofing Association uye inotsigirwa neInternational Roofing Alliance, iyo American Roofing Engineering Association uye neGerman Roofing Engineering Association ine dingindira re "Bata mikana mitsva uye gamuchira. ramangwana idzva "Kuvhura kukuru paBeijing International Conference Center.
Zuva rekuvhura kwechiratidziro
Mamiriro acho akazara nezviitiko zvakakura
Tevera mutsoka dzemupepeti
Mukutarisa zviitiko zvemazuva ano
Vakakurumbira hombe enterprises gather
Yegore negore isingaenzaniswi kuratidza ndiyo yegore chiitiko yeChina isapinda indasitiri. Seimwe yematatu makuru epasi rese ekuratidzira asina mvura, kuratidzwa uku
ine nzvimbo yekuratidzira yemakumi mashanu emamirimita emamirimita, vanopfuura 260 varatidziri vacharatidza zvinopfuura mazana masere zvigadzirwa zvemvura uye masystem, achivhara cheni yese yeindasitiri yeindasitiri isina mvura.
Icho chizere-chinoshanda chikuva chine simba mudzimba kutengesa uye kutengesa kunze kwenyika uye kutengeserana kwekune dzimwe nyika, ichitarisa mukugadzira yemhando yepamusoro kuratidzira, kuongorora emhando yepamusoro makambani emakambani kuti atore chikamu muchiitiko, kukwezva emhando yepamusoro vatengi kuti vashanyire nekutenga, vachinyatsotevera mamiriro azvino eindasitiri, uye kusunungura maindasitiri maitiro Uye nekucheka-kumucheto zvigadzirwa zvitsva, uye kuyedza kuunganidza simba kumabhizimusi mabhizinesi kuti atangezve kusimudzira mushure mehosha.
Vashanyi vakakomberedza China vanobatana muchiitiko chikuru
Pazuva rekuvhura kwechiratidziro, varongi vacho vakanyatso kumisikidza kurwisa-denda kurumbidza kwechivakwa chinodzivirira mvura indasitiri mune nyowani yechigadzirwa kuburitswa uye kuvaka nzvimbo yekuratidzira mudhorobha rekutanga reimba yekuratidzira, mhemberero yekuvhura kwechiratidziro, chitsva chigadzirwa kuvhura musangano weiyo yese indasitiri cheni, uye kuratidzwa kwepasi rose kufukidza uye isina mvura tekinoroji kuvaka. Kudyidzana kwechiitiko kwakawedzerwa, uye kwakakwezva makumi ezviuru zvevaoni kuti vatore chikamu. Chiitiko chaive chizere nemanzwi, uye vashanyi vakakomberedza China vakapinda muchiitiko chikuru.
Chichangobva kuburitswa chigadzirwa chinouya chinotyisa
Fuzhou Lesite yakaunza chizvarwa chitsva chematenga emoto anopisa-mweya mweya LST-WP4 uye LST-RM1 kuratidza ino nguva uye yakwezva kutarisisa kwevanhu vazhinji pachiratidziro.
LST-WP4 ine hachizi-nyowani dhizaini dhizaini, yakawanda-nzvimbo yekushambadzira kunyorera. Kunyangwe iri mudenga remvura padenga kana pamucheto, kana padhuze neparapeti kana dzimwe nzvimbo dzakamanikana, mhando dzepamusoro dzemvura dzinodzivirira mvura dzinogona kusungwa nekukurumidza (PVC, TPO, EPDM, ECB, EVA, nezvimwewo). Iyo yekuchengetedza-yemahara isina brushless mota yeiyo yakawedzeredzwa vhezheni inoipa iyo yepamusoro kuita uye kusimba, uye iko kuita kwese kwakanyanya kwazvo kupfuura izvo zvezvigadzirwa zveiyo imwe nhanho.
Chizvarwa chitsva chekupfekera mweya unopisa wekutemesa muchina RM1, mutengo unodhura, mini chimiro, zvakare yakagadzirirwa neakakwira-magumo muchina 3400W yakakwira-simba kudziya unit uye yakavharwa-chiuno dhizaini yekuratidzira tembiricha uye yekumhanyisa paneru, kuti uwane yepamusoro thermoplastic isina mvura membrane Welding (PVC, TPO, EPDM, ECB, EVA, nezvimwewo), iko kuita kwese kwakanyanya kupfuura zvigadzirwa zvedanho rimwe chete.
Pamhepo nekutengesa kunze kwenyika
Pazuva rekuvhurwa kweMvura Isina Kuratidzwa muna Gumiguru 28, zvigadzirwa zvitsva zveLesite Technology zvakatangwa panguva imwe chete pane dzinoverengeka dzekunze uye dzekunze e-commerce mapuratifomu, zvichipa vatengi vekumba uye vekunze mukana wekutanga zvigadzirwa zvitsva kutanga. Kutenga pamhepo uye kuratidza kwekunze kwekutengesa nekutengesa zvakawanikwa. Kubatanidzwa kusingagumi kunotendera vatengi kunakirwa neazvino tekinoroji uye yakawanda yekucheka-kumucheto tekinoroji uye nyowani zvigadzirwa masevhisi pasina kusiya imba.
Mukupindura ichi chitsva chigadzirwa kutengeswa, LesiteTechnology yakaparura iyo "Imwe neimwe LST-WP4 Inouya NeMumwe Yemahara Hot Mhepo Welding Pfuti" yekusimudzira chiitiko chiitiko kekutanga (Chiitiko nguva: Gumiguru 28th-Mbudzi 28th), ichibvumira vatengi kutenga zvigadzirwa zvitsva ne mamwe mabhenefiti uye humwe ruzivo kusagadzikana.
Pazuva rekutanga rekutanga, Yakakurumbira muLesite dumba
Fuzhou Lesite Plastic Welding Technology Co, Ltd. dumba nhamba ndeye 1208. Iyo dumba rese rakatenderedza zvigadzirwa zvemoto padenga, zvinosanganiswa ne-pa-saiti michina kuratidza uye kuratidzira, kambani sumo, chigadzirwa chiratidziro madziro, zvigadzirwa zvigadzirwa, nezvimwewo, kuti uzere zvizere zvigadzirwa zvevateereri zvinopisa zvemoto padenga.
Pfungwa yechiitiko chepa-saiti. Nzvimbo yekuratidzira mhenyu yaive yakazara nevanhu. Lesite tekinoroji nyanzvi vakapa mhenyu kuratidzira uye tsananguro yevaenzi. Vatengi vanobva kuChina nekune dzimwe nyika vakaratidza kufarira kwakadzama muzvigadzirwa zveLesite.
Munzvimbo yekuratidzira yechigadzirwa, vateereri vanogona kusangana nezero-kure nechigadzirwa, uye vanogona kuona intuitively kuita kwechigadzirwa nekubata, kucherechedza, uye kuzviedza. Kune vatengi vanobvunza nezvehunhu hwechigadzirwa ipapo, uye kunyange vatengi vazhinji vanoisa maodha chaiwo. Imba yekuratidzira inozivikanwa kwazvo uye nzvimbo yacho inoshamisa.
Kupfuura izvozvo, kunakidzwa kuri kuenderera
Chiratidziro chisina mvura che2020 changotanga, uye mufaro wacho unopfuura izvozvo. Mumazuva maviri anotevera, kushamisika kucharamba kuchivandudza, uye isu tinotarisira kusvika kwako!
Exhibition zita: 2020 China International Roofing uye Kuvaka Isina Mvura Technology Exhibition
Booth nhamba: 1208
Nguva yekushanya: Gumiguru 28-30, 2020
Nzvimbo: Beijing · Iyo National Convention Center